I-ID yobuso ibuyisa i icon yeMacinstosh yeklasikhi | Ndisuka mac
I-ID yobuso ibuyisa i icon yeMacinstosh yakudala
Itekhnoloji entsha yokukhusela i-iPhone X inxulumene nobuso bethu ngetekhnoloji ye-ID yobuso, itekhnoloji eyiyo kakhulu kunzima ngakumbi ukusilela ukuba siyithelekisa noluvo lweminweInzwa eye yanyamalala ngokupheleleyo kwi-iPhone kunye neApple ibhiyozela ukumiliselwa kwe-iPhone yokuqala kwintengiso.
Ukuba yi-Apple yinkampani engathandi ukujonga kwixesha elidlulileyo, kuyamangalisa ngakumbi ukuba ilogo esetyenziswe kwi-ID yesazisi iqheleke ngakumbi kubasebenzisi beMac abebekwi-ecosystem ye-Apple iminyaka emininzi. Phantse kuwo onke amathuba, U-Apple wayefuna ukwenza i-nod ye-classic Macintosh.
U-Apple ukhuphe i-logo ye-ID yobuso kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo ngexesha lokunikezelwa kwe-iPhone X ukubonisa imisebenzi yokuskena ubuso kwesi sixhobo. I-logo ayibonisi ubuso obuncumo obubonakala ngathi buntathu, kodwa eneneni luguqulelo nje olutsha lwe-icon ye-Happy Mac yeklasikhi eyenziwe nguSusan Kare weMacintosh yoqobo. I-logo ye-Kare ye-Happy Mac ye-logo iye yahlaziywa kwakhona ukususela ekuqaleni kwayo kuma-1980. I-icon yaphefumlelwa ngokuyinxalenye ngumlingiswa weBatman-Face. Inkampani esekwe kwiCupertino ekuqaleni yayisebenzisa ukubonisa ukuba iMac yakho ibiphumelele ngempumelelo. Okwangoku i icon yesicelo sokuFumana kwi-macOS.
Impembelelo yokuqala efunyenwe ngabasebenzisi abalandela inqaku eliphambili, yayingeyonto imbi, kuba kwakamsinya nje ukuba kufunyenwe i-Craig Federighi terminal, ukwamkelwa kusilele, nangona isenokungabikho ngenxa yokungasebenzi kakuhle kodwa kwabanye njenge-iPhone ivele yajika kwaye xa oku kusenzeka kufuneka ufake ikhowudi yokhuseleko njengoko sisazi sonke. Ukushiya ecaleni esi siganeko sincinci, iimvavanyo ezahlukileyo ezenzelwe abo banethamsanqa abakwazanga ukuya kumsitho baye basibonisa ukuba umsebenzi ukhawuleze kangakanani, kodwa ziqhelanise nenyaniso yokuba kusoloko kufuneka sijonge kwiscreen ukuze sikwazi ukuvulwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-ID yobuso ibuyisa i icon yeMacinstosh yakudala
UDiego Rodriguez-Vila sitsho
Ewe, ndibona ingxaki enkulu kakhulu kwezokhuseleko. Ngaphambili, ukuba amapolisa athathe ifowuni yakho kuwe, abakwazanga ukuyivula ngaphandle kokuba ubeke umnwe.
Ngoku, ngokuvula phambi kwakho, bangena ngaphandle kokwenza nantoni na. Andiboni kakuhle.
Phendula u-Diego Rodríguez-Vila
UIgnacio Sala sitsho
Ukuba awujongi kwiscreen, kufanele ukuba ingavuli, kodwa icacile ithiyori. Siza kubona isenzo xa sifika kwimarike. Ukubulisa.
I-Trello ngoku iyafumaneka kwiVenkile yeApple yeMac
Ngokunjalo imitya emitsha yeApple Watch Series 3 nangaphambili